China Aluminium camera ikhoyili ifektri abaphakeli I-Alucosun
Aluminium camera ikhoyili
I-aluminium eyenziwe ngaphambilini ihlinzeka ngomkhakha osezingeni eliphakeme kakhulu opendiwe ngemibala eminingi nangezindlela zokwakheka. Kuyatholakala ngisho namafilimu aphrintiwe ukunikeza imiphumela efana nezinkuni-okusanhlamvu nemabula.
Umbala ungaba matt kakhulu noma ucwebezele kakhulu, ubushelelezi, ubheke anti-bhala. Futhi iyatholakala kumamaki e-aluminium ahlukene kanye nama-alloys ukuze ukwazi ukulinganisela ukuqina namandla. I-Alucosun inikeza ikhoyili ephezulu eqeqeshiwe e-PE, i-HDPE, i-PVDF, uhlobo lwe-NANO-PVDF yohlelo lwakho lokusebenza oluningi.
I-PVDF & FEVE
Iphaneli eyinhlanganisela ye-Alucosun aluminium isebenzisa kuphela upende we-PVDF KYNAR 500 noma we-FEVE owaziwa ngokuqina kwawo okuhle kakhulu. Izici ezinhle kakhulu zamakhemikhali nezingokomzimba zalawo pende wekhwalithi ziye zaqashelwa kahle futhi zafakazelwa abasebenzisi bomhlaba wonke nabadwebi bezakhiwo kule minyaka eyishumi edlule futhi manje lokhu kusaqhubeka nsuku zonke.
I-Alucosun inebanga lemibala elingenamkhawulo nokukhethwa kokuqeda okuhlukahlukene, ukuhlangabezana nabaqambi kanye nobuciko obungenamkhawulo bezakhiwo.
Iphaneli elihlanganayo le-aluminium le-Alucosun NANO-PVDF ligcotshwe ungqimba wopende weNano-PVDF, engeza ungqimba lwe-anti-pollution ye-NANO ebonakalayo enamathela ngenhla kwe-PVDF enamathela esikhunjeni sangaphambili se-aluminium. Ngaphandle kwazo zonke izinzuzo eziphawulekayo zokumboza kwe-PVDF, i-NANO-PVDF iphakeme ekumelaneni nokungcola, ubufakazi bamakhemikhali nokuzihlanza.
Njengoba imakhroskophu ibonisa, indawo yePVDF inamaqhubu ngenkathi enye ye-NANO-PVDF ibushelelezi. Ngenxa yalokhu, ukungcola nowoyela akunakugcwala ebusweni futhi ithonsi lemvula lingabasusa kalula, kunciphise kakhulu izindleko zokulungisa.
Izinkuni & IMABILE
Uchungechunge lwe-Alucosun nochungechunge lwemabula luhlanganisa ubuhle bemvelo bokhuni namatshe kanye nezakhiwo ezinhle kakhulu zephaneli ehlanganisiwe ye-Alucosun aluminium, eletha ukubukeka okusha kwezakhiwo. Enye inzuzo ebucayi ngaphezu kokhuni lwangempela namatshe ukuthi okokusebenza kungabunjelwa kunoma yimuphi umklamo oceliwe.
Izinhlobo ezimbili ziyatholakala ngekhwalithi yokuqedela ngopende yakwaKynar.Lokhu kuqinile ngokwanele ngohlelo lokusebenza lwangaphandle lwesikhathi eside ngenkathi ifilimu yokuqedela ye-PET isetshenziswa yinhle kepha ibiza kahle ukuhlobisa endlini.
Uchungechunge lwe-Alucosun olubhulashiwe nesibuko likuvumela ukuthi wamukele isikhalazo sobuhle nge-lacquer ecacile yokuvikela ikhwalithi, okwamanje, ikunikeze ukusebenza okuphezulu kwephaneli elihlanganisiwe le-Alucosun aluminium njengokuqina okungavamile nokumelana nesimo sezulu. Ngokuningiliziwe, uchungechunge lwebhulashi lukwenza ubone i-aluminium eluhlaza ngokusezingeni eliphezulu nochungechunge lwesibuko sakho ikunikeza ukubonakala okufanayo njengesibuko sengilazi esizwela ingcindezi.
Ngenxa yomphumela oyingqayizivele, lawa ma-finish amabili athandwa kakhulu ekuhlobiseni kwangaphakathi nokubukeka. Ngaphandle kwalokho, i-Alucosun nayo inokubukeka kwe-anodized kwalezi zinto ezimbili eziqedile ezinikeza abaklami imibono yokudala ekwakhiweni kwangaphandle ngewaranti yesikhathi eside.
I-AA1100 / AA3000 / AA3105 / AA5000
Iqinile, iyinsimbi, Ngokhuni, i-Mirror, i-Anodized, ibhulashi
PE, HDPE, PVDF, FEVE, NANO-PVDF, ANODISED
Zophahla, Uphahla lwangaphakathi, Umnyango, Ukwenza ACP, umsele, lukathayela lukathayela
kungakapheli izinsuku eziyi-15-25 kuncike ngosayizi ofanayo wamakhoyili
I-L / C engenakuguqulwa lapho ibonwa, noma i-T / T.
Langaphambilini I-PANEL Ehlanganisiwe Yensimbi
Olandelayo: I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL
Aluminium ikhoyili camera
Camera Aluminium Ikhoyili
Ikhoyili ye-Aluminium Eboshwe
I-Pvdf Camera Aluminium Ikhoyili
IHushi Industrial Park, idolobha laseHuashi, iJiangyin City, iSifundazwe saseJiangsu, eChina, 214421.
Izinto eziyinhlanganisela (Jiangsu) bekukhethiwe ...
Kusukela ngoSepthemba 1, iChina izothatha ngokuhlanganyela ...
New Antibacterial Polyurethane kusiza Heal ...
© Copyright - 2010-2020: Wisdom Metal Composites Ltd, Wonke Amalungelo Agodliwe.